Salaamanews » Daawo Sawirrada iyo muuqaal kulan Minnesota lagu qabtay
Home » Keydka sawirrada, Maqaallo, Warar Daawo Sawirrada iyo muuqaal kulan Minnesota lagu qabtay Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 17th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Ra’iisal Wasaaarihii hore ee Soomaaliya Dr. C/weli Gaas oo la hadlay Soomaalida Minnesota (SAWIRRO)Daawo: muuqaal iyo sawirro ku saabsan Madaxweynaha Soomaaliya oo kumanaan Soomaali ah kula hadlay MinnesotaSoomaalida Minnesota oo billad-sharafsiisay wasiirkii hore ee gaadhaandhigga (Daawo sawirro) Axmed Samatar iyo Galeyr oo mar kale Minnesota ka dooday midnimada iyo horumarka Soomaaliya (daawo sawirro iyo muuqaal)Hammiga Cabdiweli Gaas iyo Putland (Warbixin, cod iyo sawirro)
(Salaamanews)-Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxaa ay soo qaban-qaabiyeen kulan looga hadlayo midnimada, cadaalada iyo horumarka Soomaaliya, kaasi oo lagu casuumay labo mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Kuwaasi oo kala ahaa Dr. Cali Khaliif Galeyr iyo Axmed Ismaaciil Samatar.
Kulankaan oo dhacay magacaaladda Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka soo qeybgalay dad aad u fara badan oo isugu jira qeybaha bulshada, iyadoona labada mudane ay sharaxaad ka siiyeed Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota wajiga iyo isbaddelka cusub ee ay Soomaaliya haatan gashay.
Prof: Axmed Ismaaciil Samatar, oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartantay xilka madaxweynimo ee Soomaaliya, haatanna ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya oo ugu horreyn ka hadlay kulankaan, ayaa ka sheekeeyey horu-socodka isbeddalka cusub ee Soomaaliya iyo waliba siddii loo sii xoojin lahaa, isagoo sidoo kalena ka hadlay caqabadaha ku horgudban isbeddalkaan iyo sidii looga gudbi-lahaa.
Sidoo kale waxaa kulankaan ka hadlay Cali Khaliif Galeyr oo ka mid ahaa ra’isal wasaareyaashii Soomaaliya soo maray xiligii ay dalka jireen dowladdihii kumeel-gaarka ahaa,hadana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, waxaana uu rejo wanaagsan ka muujiyey marxaladda cusub ee ay Soomaaliya gashay, isagoo dadka Soomaaliyeed ku dhiiragaliyey in ay ka faa’ideystaan fursada uu xambaarsan yahay isbeddalkaan.
Waxaa Cali Khaliif, ugu baaqay guud ahaan Soomaalidu in ay la shaqeeyaan madaxda cusub doorteen, taasina ay horseedi-karto in wadanka ay ka dhaqan gasho dowlad dhexe oo xoog leh.
Sidoo kale waxaa kulankaan ka hadlay Cabdiqaadir Cadow, oo ka mid ahaa dadkii ka shaqeynayey nidaamkii looga gudbayey kumeel-gaarnimada, gaar ahaan gudigii loo xilsaaray xulutaanka baarlamaanka cusub ee Soomaaliya haatan ka jira, isagoo awalna ka mid ahaa qurbe-joogtii Minnesota ka tagtay, waxaana uu u sheegay in intii uu ku sugnaa gudaha wadanka Soomaaliya uu soo arkay idideele nabadeed iyo hami-horu-socod leh.
Intii kulankaan socday, ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa Sadik Warfa, oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota, waxaana uu ugu baaqay dadkii Soomaaliyeed ee kulankaan ka soo qeybgalay in ay xooga saaraan sidii wadanka horumarkiisa looga shaqeyn lahaa, gaar ahaan qurbe-joogta in looga baahan yahay in ay gacan ka geystaan dhinaca dhaqaalaha dalka.
Hadaba Salaamanews waxaa ay halkaan hoose idin kugu soo bandhigaysaa sawirradii kulankaasi oo aad u faradan.
Sidoo kale halkaan hoose ka daawo muuqaalkii guud (Video) oo dhammeystiran oo aan ka soo qaadanay qeybteena talefishinka SOMALI TV OF MINNESOTA (SOMTV). Siyaad Saciid Salaax, Salaamanews
Tags: warar « Qoraalkii HoreSoomaalida Kenya oo qaati ka taagan raaf kadib qaraxyo ruxay Nairobi	Qoraalka Xiga »Farta Soomaaliga oo 40 jirsatay iyo munaasibad lagu maamusayo oo ay ka qeybgalayaan madaxda Soomaalida oo maanta Jabuuti ka dhacaysa (Daawo muuqaal iyo warbixin)	Halkan Hoose ku Jawaab